प्रदेश पाँचको नाम लुम्बिनी कि बुद्धभूमि ?
बुटवल, १६ चैत - प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङगाएको एक महिना भइसक्यो । ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तय भइसकेको छ । तर अन्य ६ वटा प्रदेशहरूले प्रदेशको नाम के राख्ने र स्थायी राजधानी कुन शहरमा टुङगो लगाउने भन्ने विषयमा अझै प्रवेश नैं गरेका छैनन ।
यस प्रदेश (पाँच) को राजधानी टुङगाउने विषय कठिन देखिए पनि नामाकरणको विषयमा प्रदेश पाँचमा समस्या नरहेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । उनी भन्छन, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेश सभाले टुङगाउँछ । तर प्रदेशको नामाकरणमा हामीसँग त्यति धेरै समस्या छैन । बरू प्रदेशको स्थायी राजधानी सबैको पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ/हुन्छ ।’
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ । त्यस्तै धार्मिक क्षेत्रहरू, रूरू, रेसुङगा, स्वगद्वारी, बागेश्वरी सुपादेउराली पनि छन । नदीको नामाबाट राप्ती, तिनाउ, जलजला लगायतका नदीहरूबाट पनि प्रदेशको नामको बारेमा चर्चा सुनिन्छ ।
पहिलो संविधानसभा विघटनको संघारमा पुग्दा यस क्षेत्रलाई थारूहट प्रदेश नामाकरण गनुपर्ने आवाज उठे पनि अहिले त्यो बोली सुनिँदैन । तर यस प्रदेशका संस्कृतिविद, सामाजिक विश्लेषक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रदेश नम्बर पाँचको नाम लुम्बिनी र बुद्धभूमि मध्ये एउटालाई छनौट गरेर राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
संस्कृतिविद् डा. गितु गिरीले प्रदेश नम्बर पाँचको नाम लुम्बिनी निर्विकल्प भएको बताए । उनले भने, लुम्बिनी प्रदेश, राष्ट्रको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय गौरव भएकाले यही नाम उपयुक्त हुन्छ । लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सुचीकृत पनि छ । यसलाई विश्वले पनि चिन्छ । सबै प्रदेशबासीको अपनत्व गराउँछ ।’
उनले थपे, ‘लुम्बिनी बाहेक अन्य नाम खोज्न थालियो भने विवाद आउन सक्छ । त्यसैले प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गर्नुको म विकल्प देख्दिन ।’
प्रदेशको नामाकरणमा हामीसँग त्यति धेरै समस्या छैन । बरू प्रदेशको स्थायी राजधानी सबैको पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ/हुन्छ : शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री
प्रदेश नम्बर पाँच पहाडका ६ र तराईका ६ जिल्ला मिलेर बनेको नेपालको मध्य भागमा अवस्थित प्रदेश हो । लुम्बिनी विनाको प्रदेशको कल्पना पनि गर्न नसकिने बुटवल–१० का राजन केसी बताउँछन । यहाँ प्रदेश विभाजनको चलखेल हुँदा जुन आगो बलेको थियो । ‘यस प्रदेशको नाम लुम्बिनी बाहेक अन्य नामबाट राखिए त्यस्तै आन्दोलन हुन्छ’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
प्रदेश नम्बर पाँच सरकारले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्ने बताउँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नाम बारे धेरै सांसदहरू पनि सहमत जस्तो देखिन्छन । यस प्रदेशमा ८७ सांसद छन् । संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक विश्लेषक युवराज कंडेलले प्रदेश पाँचको नाम लुम्बिनीको साटो बुद्धभूमि नाम राख्न सुझाव दिन्छन । ‘लुम्बिनी शब्दले एउटै क्षेत्र ओगट्छ,’ कंडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘बुद्धभूमि राख्दा बुद्धको सम्मान र प्रदेशको पहिचान समेटिन सक्छ ।’
रूपन्देहीको लुम्बिनी, गौतम बुद्धले २९ वर्ष बिताएको कपिलवस्तु र अष्टधातु रहेको नवलपरासीजस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिलाई समेट्न बुद्धभूमि उपयुक्त हुने कंडेलेको तर्क छ ।
दाङका सामाजिक विश्लेषक गोविन्द आचार्यले संसारले चिनेको लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी प्रदेश नै राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी र बुद्धभूमि मध्ये एउटा नाम प्रदेश सरकारले टुङगाउदा राम्रो हुन्छ ।’ त्यस्तै सांसद जाल्पा भुसालले प्रदेशको नामाकरण छिट्टै टुङगाउन आग्रह गरिन् ।
नेता खनाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबीच भेटवार्ता काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ । मंगलवार बिहान डल्...
विप्लव नेकपाका नेता थापा र बुढालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश